Vaovao - Maninona no mahasoa anao ny fihinana paoma maina?
Ny paoma maina dia misoroka ny fitohanana ary mitazona anao ho lava mandritra ny fotoana maharitra
Ny fomba hafa fitehirizana ny voankazo dia matetika manala ny votoatin'ny voan'ny voankazo. Fa tsy natao ho an'ny paoma maina.
Ny iray amin'ireo tombony azo avy amin'ny paoma maina dia ny fonosana be dia be avy amin'ny fibres tsy mety levona sy tsy mety levona. Paoma maina antsasaky ny kapoaky ny paoma efa manome anao tokony ho 3-4 grama ny fibra sakafo, ampy handrakofana 13-20% ny takiana fibra isan'andro.
Ny fibres dia mitazona anao ho voky amin'ny fisorohana ny spikes amin'ny siramamy ao amin'ny ranao aorian'ny sakafo. Izy io koa dia manampy amin'ny famoahana ireo poizina sy bakteria manimba amin'ny tsinainao. Ny fibre dia manalefaka ny fipetrahanao mba hitazomana ny fitohanana koa. Ny fibre soluble dia tompon'andraikitra amin'ny fifehezana ny haavon'ny siramamy ao amin'ny rào, raha ny fibres tsy soluble kosa dia mitazona ny fahadiovan'ny tsinainao.
Misafidiana paoma maina mbola manana ny hodiny, satria avy aiza no ilana ny ankamaroan'ny fibra.
Ny paoma maina dia misy vitamina B izay tsara ho an'ny hormonina, ny ati-doha ary ny angovo
Ny paoma maina dia misy vitamina B ilaina roa izay mampiroborobo ny metabolisma angovo, manatsara ny fifandanjan'ny hormonina ary mamelona ny ati-doha. Asidra pantothenika (vitamina B5) sy pyridoxine (vitamina B6) izy ireo.
Ny asidra pantothenika dia tompon'andraikitra amin'ny fanampiana ny vatanao hamorona angovo avy amin'ny sakafo hohaninao. Ilaina ihany koa amin'ny famokarana hormonina. Ny paoma maina dia misy 3% eo ho eo amin'ny fihinanana vitamina isan'andro.
Pyridoxine dia vitamina B izay manampy amin'ny metabolisma proteinina ary manampy amin'ny famoronana neurotransmitter. Neurotransmitters dia mpandefa simika ao amin'ny ati-doha izay manatsara ny valin'ny ati-doha sy ny asany. Ny paoma maina dia afaka mandrakotra manodidina ny 6% amin'ny fihinanana pyridoxine isan'andro omenao.
Paoma maina manatsara ny fahasalamana sela
Ny paoma maina dia loharanom-pahalalana antioxidant, indrindra ny polyphenols. Ireto dia singa manampy hanohitra ny fahasimban'ny sela nateraky ny radika afaka.
Ny radikaly maimaim-poana dia molekiola sy atôma atolotry ny akora toy ny fahalotoan'ny rivotra, ny bibikely, ny alikaola ary ny sakafo nendasina. Ny radikaly maimaim-poana dia tototry ny vatana ary miteraka fahasimbana amin'ny sela amin'ny alàlan'ny dingana fantatra amin'ny hoe oxidation. Midika izany fa ny radika maimaim-poana dia mandray ireo elektrôna hita ao amin'ilay sela, ary mamela azy io ho proteinina, fonosana ary ADN simba.
Ny sela simba dia mety hitranga amin'ny taova sy ny rafitry ny vatanao. Mety ho sendra fahasimbana amin'ny sela ianao amin'ny faritra sasany amin'ny vatanao. Ny fambara sasany amin'ny fahasimban'ny sela dia mety ahitana ny havizanan'ny vatana, ny hoditra maina, ny volo ary ny tsy fandriam-pahalemana ara-tsaina.
Polyphenols dia antioxidants izay manampy ny sela simba hamerina ny tenany. Azon'izy ireo atao ny manafoana ireo radika maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fanoloana ireo elektrôna nangalarina tao amin'ireo sela. Ny polyphenols koa dia manampy amin'ny fampihenana ny isan'ny radika afaka miditra amin'ny vatana.
Ny iray amin'ireo tombony azo avy amin'ny paoma maina dia ny fanatsarana ny haavon'ny polyphenol ao amin'ny vatana. Ireo antioxidants navotsotra tamin'ny alàlan'ny fihinanana paoma maina dia manampy ny selanao hiatrika ny vokatry ny fahasimban'ny sela. Ny sela ao amin'ny vatanao dia hovelomina ary ho fitaovana hanasitranana haingana ny tenany, ka hitarika fitomboan'ny angovo, hamirapiratra hita eo amin'ny hoditrao ary hanatsara ny toe-tsainao sy ny fiasan'ny sainao.